Thursday June 18, 2020 - 07:09:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradda Arrimaha dibadda dowladda Imaaraatka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in maamulka Yahuudda ay ku casuuntay bandhig caalami ah oo ka furmaya magaalada Dubai.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka ninka lagu magacaabo Anwar Qarqaash oo ka qeyb qaadanayay shir sanadeedka guddiga yahuudda Mareykanka ayaa sheegay in wax iska caadi ah tahay in ay lamacaamilaan Yahuudda oo uu ku tilmaamay dowlad xadaarad leh.
Imaaraatku wuxuu sheegay in dib usoo celinta cilaaqaadka kala dhaxeeya Yahuudda uu ahaa qorshe muddo sanada ah soo socday islamarkaana ay farriimo niyadsami leh ka heleen maamulka loogu yeero israaiil.
Mas'uulkan katirsan dowladda imaaraatka Carabta ayaa si aan leex leexad laheyn ugu faanay in dowladooda uu xiriir kalgacayl leh kala dhaxeeyo Yahuudda, xukuumadda Abu Dubai waxay ku anndacoonaysaa in wanaajinta cilaqaadka kala dhaxeeya Yahuudda ay uga gol leedahay sidii ay u adkeyn laheyd waxa ay ugu yeereen nabadda bariga dhexe.
Yuusuf Alcuteybi oo ah safiirka Imaaraatka ee magaalada Washington ayaa wareysi uu dhowaan siiyay wargeyska Yadcuud axranood ee Yahuuddu leedahay wuxuu ku sheegay in dowladdiisu ay albaabada diblumaasiyadda ufurtay Yahuudda ayna dowladaha kale ee carabta ugu baaqayaan in iskaashi ay la sameystaan Yahuudda si meel loogasoo wada jeesto wax uu ugu yeeray argagaxisada iyo xagjirnimada.
9-kii bishaan June ayay aheyd markii diyaarad ay leedahay dowladda imaaraatka ay ka degtay garoonka Ben Gurion ee dhulka Yahuudda iyadoona halkaas geysay daawooyin iyo badeecado ganacsi.